ဖြန့်ချိ SystemRescue CD ကို v2.4.0 | Linux မှ
ဖြန့်ချိ SystemRescue CD ကို v2.4.0
ဗားရှင်း ၂.၃.၀ မှသုံးလကြာသည် SystemRescueCD ပါ အသွင်အပြင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏.
ဤသည် distro ၏ LiveCD အပေါ်အခြေခံသည် Gentoo, အသုံးပြုသည် Xfce Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်၊ ပျောက်ဆုံးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်နှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်ရန်ကိရိယာများကိုယူဆောင်လာသည်
၎င်းသည်အောက်ပါဖိုင်စနစ်များကိုထောက်ပံ့သည်။ Ext2, Ext3, Ext4, ReiserFS, XFS, JFS, VFAT, NTFS, ISO9660 နှင့် Btrfs ။
ယခုဗားရှင်းအသစ် (2.4.0) သည် Linux v3.0.8 ကို standard kernel သို့မဟုတ်ပုံမှန်အားဖြင့်ယူဆောင်လာပြီးအခြား kernel ၏မူကွဲကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။Linux v3.1.0) ။ အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာထောက်ပံ့မှုမရှိတော့ခြင်းဖြစ်သည် Reiser ၄ ဒီအဆန်တွေမဆို၌တည်၏။
ဒီဗားရှင်းအသစ်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏ ဗားရှင်း 0.10.0 GParted (GNOME Partition ကိုအယ်ဒီတာ), X.org ဆာဗာဗားရှင်း 1.10.4 နှင့် Firefox ကို 7.0.1.
ဒီဗားရှင်းအသစ်က ၃၆၆ MB ရှိ၊ download စာမျက်နှာသို့ကျွန်ုပ်လင့်ခ်ကိုချန်ထားသည် SystemRescueCD ကို download လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » ဖြန့်ချိ SystemRescue CD ကို v2.4.0
နောက်ဆုံး Ubuntu ကိုအခြေခံမထားသည့် distro တစ်ခုရှိသည်။
ကောင်းပြီ dudes system ကို load ရန်အဘို့အကကောင်းပါတယ်
ကောင်းတယ်၊ ဒီအရက်သည်ကျွန်ုပ်ကိုတစ် ဦး ထက်ပိုသောအလျင်မှထွက်လာသည်
Bayron ortiz ဟုသူကပြောသည်
Bayron Ortiz သို့ပြန်သွားပါ
သင်၏ Android ပေါ်ရှိ KDE သည်အဖြစ်မှန်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထက်ပိုနေပြီဖြစ်သည်